Code Racer wuxuu nagu hogaaminayaa khadadka barnaamijka ee gawaarida | Androidsis
Code Racer waa ciyaar waditaan heer sare ah kaas oo aan ku xakameyneyno gaariga dhowr saf oo koodh ah in aan barnaamij u wadno si baabuurkeennu u fuliyo tallaabooyin taxane ah sida xawaareynta, istaagida, leexinta iyo kuwa kale oo badan.
Ciyaar aad u xiiso badan iyo taas oo naga caawinaysa si fiican u fahamka fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijka, Tan iyo markii aan dooneyno inaan sameyno daraasiin tijaabooyin ah illaa aan ka helno khadadka saxda ah ee koodhka si loo fuliyo ficilka la doonayo sidaas awgeedna baabuurkeennu wuxuu la kulmaa ujeedkiisa ah inuu gaaro himilada.
1 Barnaamijyada waa maxay jeermis!
2 Tamarta Kinetic ee Xeerka Racer
3 Barnaamij, fiisikis iyo ciyaar xujo ah
Barnaamijyada waa maxay jeermis!
Ago Wax yar baynu haysannay Codbixinta weyn ee Rabidds! iyada oo isla fikirkaas oo cududda qeexan ay awood u leedahay inay soo qaaddo Rabbiyadu markay fuliyaan koodh aan dhaqan gelinay oo ku saleysan xariiqa ficillada in la raaco. Nidaamka 'Racer Code' waxaynu ku jirnaa isku fikrad, laakiin waxay ku kala duwan yihiin inaynu gaarigeenna gaarno si aan ujeeddada u gaarno oo aan u sii joogno dhawr ilbiriqsi.
Waxaan si fudud ku darnaa falal taxane ah oo loogu fulinayo hab toosan. Taasi waa, waxay ku bilaabmaysaa ficilkii ugu horreeyay ee lagu raaco kii labaad iyo ilaa kii ugu dambeeyay ee aan haysanno. Tusaale ahaan, waxaan leenahay a taxanaha amarrada nooca: dardar, gadaal, u leexo midig, bidix u leexo, jejebi oo sug.
Amarradan ayaa loo bartay ficil kula samee gaariga oo u dhaqaaq inuu u dhaqaaqo yoolka. Marka laga reebo awood u lahaanshaha xulashada noocyada taliska, waxaan sidoo kale ku qasbanaaneynaa inaan xulno awooda amarka iyo waqtiga ficilku socon doono. Waqtigu waa muhiim maxaa yeelay waxay noo ogolaan doontaa inaan isticmaalno tamarta tamarta, tamarta uu gaarigayagu heysto dhaqdhaqaaqiisa darteed, si aan u gaarno yoolka.
Tamarta Kinetic ee Xeerka Racer
Waxaan ka nidhaahnaa tamarta firfircoonida maxaa yeelay marka shay la dhaqaajinayo, iyo in ka badan baabuurka oo leh culeyskiisa, waxay muujineysaa inaan u kala jejebinno si uu u joogsado kaliya waqtiga na xiiseynaya, iyo in ka badan oo ku saabsan Code Racer marka aan ku joojinayno khadka saxda ah. Taasi waa, kuma socoto hadafku, laakiin halkii lagu sii nagaan lahaa isla meeshaas oo aan laga tagin.
Marka waa inaad xisaabi si aad u wanaagsan waqtiga ay qaadato in la dedejiyo iyo bareeg. Dhammaan amarradan waa in si habboon loo qaabeeyaa, markaa waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo mar labaad iyo mar labaad inaad isku hagaajiso mid kasta oo loo baahan yahay.
Y waxaan u baahan doonaa amarro dheeri ah iyadoo kuxiran heerka. Waddo fidsan ma la mid tahay mid bidix leexasho leh ama leh kor u kac iyo foorar sidaa darteed waa inaan xisaabinnaa xoog riixitaan iyo waqti dheereyn dheeri ah. Tani waa halka qiimaha ugu weyn ee ciyaartan loo yaqaan Code Racer ay soo gasho.
Barnaamij, fiisikis iyo ciyaar xujo ah
Iyada oo waxaas oo dhan waxaan haynaa xirmooyin taxane ah oo boqolaal ah, tartan maalinle ah iyo qaab ciyaartoy badan si aan ula wada raaxaysanno kuwa kale khadadka ficillada ah ee lagu fulinayo ee aan u baahanahay si gaadhigayagu u gaadho yoolka ka hor dadka kale. Cayaar sifiican loogu guuleystey fikradihiisa taasna waa mid aad ugu mashquulsan kuwa doonaya inay dhammaystiraan khadadka koodhadooda oo ay yareeyaan wax yar sida barnaamijkani u socdo.
Heer farsamo waxaan ku dhagannahay sheygaaga fiisikiska si fiican loo fuliyay si aan xarriiq ficil ah loogu fulinin anshax xumo wax walbana waxay leeyihiin is waafajin u gaar ah. Saamaynta tamarta firfircoonida ayaa sifiican loo ogaan doonaa markaan kudhaqaaqno ficilkeena gaariga oo leh jiido, goolal iyo waxyaabo kale oo badan. Muuqaal ahaan si fiican ayaa loo shaqeeyaa, laakiin iyada oo aan faan badan laynoo geeyo khibrad ciyaarta oo dhammaystiran.
Code Racer waxaa laga heli karaa bilaash dukaanka Play Store ciyaar ahaan in madaxeena laga jajabiyo, la fahmo aasaaska barnaamijyada lana ciyaaro fiisigiska walxaha si xirfad leh loo xakameeyo baabuurkeenna sida haddii uu yahay aalado robot ah.
Ciyaar kufiican in aad wax yar ka barato aasaaska barnaamijyada kuna raaxeyso makaanikkeeda.
Waxaad ku baranaysaa adigoo ciyaaraya
Barnaamijinta khadadka koodhku maaha mid isku murugsan
Fiisigiska sheyga wanaagsan
Muusiggu xoogaa waa soo noqnoqday
Developer: Ciyaaraha Hondune
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Khadadka barnaamijka ee koodhka lagu wado dhammaan noocyada baabuurta ee Code Racer